Taliska Booliska Oo Faahfaahin Ka Bixiyay Xidhga Cismaan Awr-liqe Iskana Difaacay Eedo Loo Jeediyay | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Taliska Booliska Oo Faahfaahin Ka Bixiyay Xidhga Cismaan Awr-liqe Iskana Difaacay Eedo Loo Jeediyay
Hargaysa (SDWO): Taliska ciidamadda booliska Somaliland ayaa ka hadlay xadhiga nin ganacsade iyo siyaasi ah oo magaciisa la yidhaahdo Cismaan C/raxmaan Awr-Liqe, oo habeen hore ay ciidamadda boolisku ka xidheen gurigiisa magaaladda Hargaysa.
Taliye ku xigeenka ciidamadda booliska Somaliland sareeye guuto C/raxmaan Liibaan Axmed (Fooxle), iyo afhayeenka ciidamadda booliska Faysal Xiis Cilmi, oo maanta si wadda jira warbaahinta ugula hadlay taliska booliska.
Waxaanay gef iyo meel ka dhac ku tilmaameen hadalo ka soo yeedhay wiil uu dhalay Cismaan Awr-liqe oo ku eedeeyay taliyaha booliska in uu ka daneeyo xadhiga aabihiis, hase yeeshee masuuliyiintani ayaa arrintaasi mid ka duwan ku sheegay.
Sareeye guuto C/raxmaan Fooxle, oo ka jawaabayay hadalka ka soo yeedhay wiilka uu dhalay Cismaan Awr-liqe ayaa sheegay in aanay jirin wax lug ah oo uu taliyaha boolisku ku lahaa ama ka ogaa xadhiga Ina Awr-liqe.
Waxaanu yidhi “Waxaan arkayay hadalo deel-qaaf ah oo lagaga hadlayay taliyaha ciidamadda booliska iyo ciidamadda. Taliyaha ciidamadu saldhig ma aha, qayb-na ma aha, wax uu xidhaana ma jiro. Qofka dacwoonayaa saldhiguu tagaa, kadib-na waxaa la raadiyaa qofkii danbiilaha ahaa, sidii loo soo qaban lahaa.
Arrinkaasi waa arrin gef ah, oo aan fiicnayn in been iyo hadal xun la iska sheego. Wax uu ka og yahay taliyaha ciidanku, ama gacan uu ku lahaa, ama wax shaqo ah oo uu ku lahaa ma jirto”.
Geesta kale gaashaanle sare Faysal Xiis Cilmi, afhayeenka booliska Somaliland ayaa isna sheegay in sababta loo xidhay Cismaan Awr-liqe ay tahay kadib markii uu 3-dii bishan af-lagaado iyo haddidaad kula kacay sarkaal ka tirsan booliska.
Iyadoo uu askarigaasi u dacwooday saldhiga booliska Koodbuur, kadib baadhitaan uu saldhigu sameeyayna lagu cadeeyay af-lagaadda uu askariga kula kacay Awr-liqe, isla markaana waraaqda soo qabashadda loo maray sifo sharciya.
“Taariikhdu markay ahayd 03/06/2018-ka. 2 xidigle Nimcaan Maxamuud Jaamac, oo ka tirsan ciidamadda booliska wuxuu u dacwooday saldhiga booliska ee Koodbuur, waxaanu dacwaynayay ninka la yidhaahdo Cismaan C/raxmaan Ismaaciil (Ina-awr-liqe), kaasoo u gaystay af-lagaado, diin cay iyo hadidaad.
Isagoo ku yidhi Xabad ayaan wejiga kaaga dhufanayaa. Sarkaalkaasi sifihii sharciga ahaa ayuu maray. Saldhiga ayaanu u dacwooday, saldhiguna kiiskii ayuu baadhay, markii uu baadhay ee wixii lagu cadeeyay, boolisku waxay dalbadeen waraaq soo qabasho (Warrant of arrest).
Waxanay waraaqda soo qabashadda ka dalbadeen maxkamadda gobolka. Ninkaasi wuxuu ku xidhan yahay saldhiga booliska ee Koodbuur. Iyadoo lagu eedaynayo haddidaad, diin cay, oo uu u gaystay sarkaal boolis ah oo lebisan”ayuu yidhi Faysal Xiis.
Dhinaca kale afhayeenka booliska Somaliland ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in iyadoo arrinta xadhiga Cismaan Awr-liqe ay sidaas ku timid in hadana loo sibir saaro taliyaha ciidamadda C/laahi Fadal.
Waxaanu yidhi “Waxaa ayaan darro ah in halkan af-lagaado aan sal iyo raad toona lahayn looga gaysto, taliyaha ciidanka booliska.
Taliyaha ciidanka boolisku waa taliyaha ciidamadda xukuma, ma soo dhex galo danbiyadda la baadhayo, shaqana kuma laha. Ma aha suuro gal, mana aha in la ceebeeyo, mana aha in af-lagaado aanu geyin loo gaysto madax qaranka”.